वार्तामा झारा टार्ने र दमनको तयारी गर्ने भन्ने गन्ध आउँछ - गम्भीर , पोलिटब्यूरो सदस्य , नेकपा | Janakhabar
२०७५ आश्विन १५ गते, सोमबार
कृष्णप्रसाद धमला ‘ गम्भीर ‘, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य हुन् । उनलाई पार्टी कामको सिलसिलामा उपत्यका आउँदै गर्दा ‘विशेष सुराकी’को आधारमा अर्का पोलिटब्यूरो सदस्य मोहनबहादुर कार्की ‘जीवन्त’सँगै काठमाडौंको नागढुंगाबाट सादा पोशाकमा खटिएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को एक टोलीले दिउँसो ३ बजे गिरफ्तार गर्यो । झण्डै १६ घण्टासम्म अवस्था अज्ञात राखी भोलिपल्ट ११ गते राति मात्र अभियोग रहेको भनिएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेल पुरयाइयो । अनुसन्धानका लागि भन्दै ३९ दिन हिरासतमा राखियो । त्यहाँ दुवैजनामाथि नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित एक क्रसर उद्योगमा आगो लगाएर ‘संगठित अपराध’ अभियोगमा मुद्दा चलाइयो । पछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथिको बहसपछि काभ्रेको अभियोगबाट सफाई पाए । रिहा पनि भए । तर रिहा भएर सर्वोच्चपरिसर नछाड्दै प्रहरीले पुनः गिरफ्तार गरी नुवाकोटमा पुर्याएर आगजनीको अभियोगमा थुनामा राखियो । त्यस अभियोगबाट पनि सर्वोच्चबाट निर्दोष ठहर भई रिहा भए । फेरि गिरफ्तार गरी दाङ पुर्याइयो र त्यहाँ ‘विष्फोटक पदार्थ’ र ‘कर्तव्य ज्यान’ सम्बन्धी मुद्दा चलायो । त्यो गम्भीर अभियोग थियो । जुन अभियोग गत वर्ष चुनावी सभानजिक भएको ‘बम विष्फोट’मा परी एक म्यादी प्रहरीको ज्यान गएको घटनासँग जोडिएको थियो ।
त्यस मुद्दामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको बहसपछि सर्वोच्चबाट दुवै जना नेता उनीहरुमाथिको अभियोग आधारहीन र अप्रमाणित ठहर गर्दै असोज ५ गते थुनामुक्त गर्न आदेश भयो । रिहा पनि भए । रिहाभएलगत्तै सर्वोच्च अदालत परिसरबाटै पुनः गिरफ्तार गरी ‘बम विष्फोट’को अभियोगमा संखुवासभा प्रहरी हिरासतमा राख्दै आएको छ । धमलापुत्र चेतन शर्मा नेताद्वयलाई गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरी थुनामा राखेको भन्दै रिहाईको माग राखेर पछिल्लो चौथोपटक असोज ९ गते दायर गरेका बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथिको बहसपछिको सर्वोच्चको आदेशमा कार्की र धमलालाई बाटोको म्यादबाहेक ७२ घण्टाभित्र लिखित जवाफसहित बन्दीलाई उपस्थित गराउन भनिएको छ । यसैबीच राजनीतिक बन्दी नेता धमलासँग क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका केन्द्रीय प्रतिनिधिसँगको हिरासत अवधिमा भएको भेटमा भएको कुराकानीका मुख्य अंशः
ती प्रश्नहरुको जवाफ मबाट पाउने कुरा थिएन । किनकि म त एउटा राजनीतिक चेतना र ज्ञान दिँदै हिड्ने मान्छे । अर्को कुरा नेकपासँग सेना र हतियार छ भन्ने सरकारको बुझाई पूरै गलत छ । हामी त राष्ट्रियता, स्वाधीता खतरा देशमा चलिरहेको दलाल संसदीय व्यवस्थाका कारणले परिरहेको छ, यसलाई भत्काएर वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना र नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारसहितको राज्यसत्तामा सहभागी गराउनेबारे, देश र नागरिकलाई आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी बनाउने नीति र एजेण्डा बोकेर शान्तिपूर्ण राजनीति गर्दै हिँडिरहेका छौं । अनि कहाँबाट सेना, कहाँबाट हतियारको कुरा आउँछ । जनयुद्धकालका जनमुक्ति सेना र सबैखाले हतियार त्यसबेलाका ‘सुप्रिम कमाण्डर’ प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको रोहवरमा तत्कालीन सरकालाई बुझाइसकेका छन् । अहिले हामीसँग हतियार र सेनाको कुरा गर्ने । वाहियात कुरा ।
हो, शारीरिक यातना दिने काम भएको छ । त्यो बेला मैले एउटा देश र नागरिकप्रति जिम्मेवार पार्टीको एकजना पोलिटब्यूरो सदस्य हुँ म, जिम्मेवार भनेर जिम्मेवारीपूर्वक कुरा गर्नुस् । म अहिले तिमीहरुको नियन्त्रणमा छु । चाहेको खण्डमा ममाथि जे पनि गर्न सक्छौ भनेँ । अनि यो दलाल सत्ता सधैं रहिरहन्छ भन्ने चाहिं नठान्नुस्, ख्याल गर्नुहोस् भनेँ । त्यसपछि अलिक मत्थर भए । पछि मानसिक यातना त कति हो कति । नहुने प्रश्न गर्ने र अनि जसरी पनि उत्तर चाहिने जिद्दीले उनीहरुलाई र हामी बन्दीलाई पनि अनावश्यक तनाव । मैले यसलाई ठूलो अन्यायको रुपमा लिएको छु । मैले भनेँ, यसो गर्नुभन्दा देशको सिमाना मिचिरहेको छ । सीमानाका नेपालीहरु भोलिपल्ट बिहान ब्यूँझदा रातारत सीमा स्तम्भ सारेर भारतपट्टि पुर्याइसकिएको हुन्छ । पूर्खादेखि बसिरहेका नेपालीसँग हातमा लाजपूर्जा छ, जग्गा छैन । त्यो सामान्य अन्याय होइन । विदेशीको ठूलो अतिक्रमण र हस्तक्षेप हो ।
त्यस्तै नागरिकको दैनिक जीवन महंगीले भाँचिरहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षामा नीजि क्षेत्रको ब्रम्हलुट छ । छोराछोरीलाई पढाउने विषयले सर्वसाधारण जीवन खाइदिएको छ । यातायात भाडा उस्तै चरम छ । तर सरकार चलाउने जिम्मा लिएर बस्नेहरु नदी, खोला, डाँडा, पहाड, तराई उर्वर भूमि, जंगल, राष्ट्रिय उद्योग, कलकारखाना पैसा खाएर माफिया, दलाल र विदेशी पूजीँवादीहरुलाई बेचिरहेका छन् । यो अपराधप्रति तपाई सुरुक्षाकर्मीहरुको ध्यान जानु पर्दैन ? भनेर प्रतिप्रश्न गरेँ ।
साउन १० गते राति ८ बजेतिरबाट शुरु भएको प्रश्न बिहान ३ बजेसम्मै चलाए । फरकफरक टोली आउँथ्यो । पानीबाहेक केही खान दिएनन् । सुत्न दिनु भन्दासमेत मानेनन् । उनीहरुको योजना भनेकै कसरी हुन्छ, के गर्दा गल्छ र आत्मसमर्पण गर्छ त्यो तरिका अपनाउने हुँदारहेछन्् । मैले खान, सुत्नसमेत नदिई करकापमा बोल्न लगाउने कोशिस गरेर मानवअधिकार उल्लंघन गर्यौ भनेर कराएपछि बल्ल बिहान ६ बजे अगाडि डेढ घण्टाजति हत्कडी र कालो पट्टीमै सुत्न दिए । त्यो ठाउँ (कोठा सीआईबीकै भवन हुनुपर्छ । त्यसपछि जीवन्त जीलाई पनि सँगै ल्याएर गाडी बिहान उज्यालो भएको रहेछ । थाहा पाउन सकिने अवस्था थिएन । कालो चिया र बिस्कुट ल्याइदिए । त्यो पनि हत्कडी र पटटीमै खान लगाए । विरोध गरेँ ‘माथिको आदेश’ भन्दै पट्टी समेत खोल्न मानेनन् । ‘माथिको आदेश’ भनेको सुन्दा ठिट पनि लागेर आउँछ । कारिन्दाहरु कति निरीह छन् भन्ने लाग्छ ।
पटकपटक रिहा अनि लगत्तै गिरफ्तार गरिरहेको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
हो, हामीलाई काभ्रेमा लगाइएको ‘संगठित अपराध’ पुष्टी नभएपछि गैरकाुनी रुपमा थुनमा राखेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले तत्काल सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा थुनामुक्त गर्न भदौ १८ मा आदेश दियो । तर स्वतन्त्र न्यायालयको आदेश कुल्चेर केपी–प्रचण्डको फासीवादी सरकारले प्रहरी लगाएर सर्वोच्च गेटबाटै पुनः गिरफ्तार गरी नुवाकोट पुर्याएर अर्को आगजनीको मुद्दा लगायो । त्यो अभियोग आधारहीन र वस्तुनिष्ठा नदेखिएको ठहरसहित रिहा तत्काल रिहा भदौ २६ गते अर्को आदेश भयो । त्यसपछि पनि दलाल पुँजीवादीहरुको कठपुतली सरकारले फेरि गिरफ्तार गरी दाङ पुर्यायो । त्यहाँ ‘बम विष्फोट’ मात्र नभई ‘कर्तव्य ज्यान’ जस्तो गम्भीर आरोपमा मुद्दा चलाइयो । त्यो मुद्दा पनि प्रमाणित हुन नसकेको ठहर गर्दै दुवै जनालाई तत्काल थुनामुक्त असोज ५ गते सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दियो । त्योबेला पनि रिहा भयौं तर सर्वोच्च गुटबाहिर कुरेर बसेका सरकारका आदेशपालकहरुले हामीलाई जबर्जस्तरुपमा घेरा हाली पुनः गिरफ्तार गरे र ‘बम विष्फोट’को अर्को अभियोगमा संखुवासभा पुर्याएर गैरकानूनी रुपमा हिरासतमा राख्ने काम गरियो ।
यो अभियोगलाई हामीले ठाडै अस्वीकार गर्दै आइरहेका छौं । संलग्नता नरहेको, थाहै नभएको घटनासँग जोडेर यो दलाल–फासीवादी सरकार नेकपाका हामी नेता र कार्यकर्तालाई फसाउने षडयन्त्रमा लागिरहेको छ । यसबाट उनीहरुले राष्ट्रको ढुकुटीमा लुटधन्दा बचाउन सकिन्छ कि भन्ने सपना देखेका छन् । त्यसको घोरभत्सर्ना गर्दछु । सपना पूरा हुने छैन । भन्न चाहन्छु, सरकारले कम्तीमा आफ्नै कानून र संविधान मानोस् । संविधान, कानून के लेखिएको छ ? त्यो एकपटक पढोस् । यस्तै हो भने हामीलाई ७७ वटै जिल्ला घुमाइसकिएको दिन सरकारको कहाँ पुग्छ ? हेक्का छ ? त्यो दिन अभाव र दमनमा पिल्सिएका जनता उठेपछि तिम्रो सरकार खरानी हुनेछ । जनताको सत्ता स्थापना हुनेछ ।
अहिलेको सन्दर्भमा सरकारले तपाईहरुमाथि ‘संगठित अपराध’को मुद्दा पनि लगायो । यसमा के धारणा छ ?
यसमा मेरो मात्र धारणा हो भन्ने लाग्दैन । पहिला त नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘अपराधिक संगठन’ हो वा होइन ? सरकारले नीतिगत रुपमा घोषणा गरेको छैन । कि हो भन्नुपर्यो कि होइन भन्नुपर्यो । कसैलाई मनमा लागेको भरमा राज्यको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्ने कसैलाई हुँदैन, छैन । प्रचण्ड–बादलहरुलाई लागेर कुनै पार्टी, संगठन अपराधी हुने वा नहुने भन्ने कुरा होइन । नीतिगत रुपमा आउन डराउने अनि अभियोग चाहिं ‘संगठित अपराध’को लगाउने । कही मिल्ने कुरा हो र यो । यो त अलपत्र पारिएका क्रान्ति र परिवर्तनको एजेण्डलाई नेपाली जनताले पुनः उठान गरेपछि र त्यसलाई नेकपाले राजनीतिक अभियानको रुपमा भेलझैं अगाडि बढाएपछि त्यसबाट सरकारको त्रसित र हतोत्साहित मानसिकताको उपजबाहेक अन्य केही पनि होइन । यो साधारण मान्छेले समेत बुझिसकेका छन् ।
होइन भने हामीलाई अपराधी संगठनका मान्छे भनेर घोषणा गरेर सरकार अगाडि आउनुपर्यो, त्यो बेला हामी पनि सोचौँला । खुला रुपमा पार्टी गठन गरेर शान्तिपूर्ण राजनीति गर्दै हिडिरहेको नेकपालाई जिस्क्याउने, झुक्याउने र फसाउने हर्कत सरकारले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । देशभर बन्दी बनाइराखिएका हाम्रा सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई बिनासर्त तत्काल ससम्मान रिहा गरियोस् । आफ्नो कुरा र विचार राख्ने वातावरण सरकारले नेकपालाई बनाउनुपर्छ ।
उसोभए ठोस प्रमाणबिनै बन्दी बनाइराख्नुको पछाडि के कारण हुन सक्ला ?
यसको पछाडि सरकारमा बस्नेहरु आफ्नै बुद्धिबाट चलेका छैनन् कसैको इसारा र योजनामा यो सबै गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । अर्को कुरा नेकपाको राजनीतिक अभियानप्रति व्यापक बन्दै गइरहेको र यसप्रति जनताको समर्थन र जनलहरको उभार देखेर दलाल संसदवादी केपी–प्रचण्डहरु आत्तिएका छन् भन्ने प्रमाण हुन् यही सब कथित हर्कत ।
उनीहरु सामाजिक बन्ने नाममा सामाजिक दलाल कित्तामा पुगेका छन् । त्यसैले नेकपाले अहिलेको सत्तालाई सामाजिक दलाल सत्ता भनेको हो । मान्छे र तिनले गर्ने कुरा सामाजिक सामाजिक जस्तो लाग्ने तर काम सबै दलाल र माफिया, पूँजीवादी र भ्रष्टचारी, तस्करलाई फाइदा पुग्ने गरी गर्ने, नीति पनि त्यसको हितमा बनाउने । राष्ट्रघात, दलाल, माफिया, पूँजीवादी, भ्रष्टचारी, तस्कर, कालाबजारिया जस्ता समाज विकासका विरोधी तत्वहरुलाई जनताले सचेत र कारवाही गर्दा दमनमा उत्रिरहेको छ सरकार । उसले समाज विकास विरोधी तत्वहरुलाई काखी च्याप्ने र जनतालाई अलपत्र पार्ने कामबाहेक केही गर्दैन ।
साँच्चिकै थुनामुक्त चाहिं कहिले हुन्छ त ?
थुनामुक्त त भइनै राख्या छ । यसमा सरकार राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रही भएदिएर पो यो समस्या आएको हो । न्यायालयले त हामीलाई निर्दोष सावित गरिसकेको छ । तैपनि सरकार अदालतको आदेशको उल्लंघन गरिरहन्छ । मानवअधिकार हनन गरिरहन्छ । प्रेसको घाँटी निमोठ्ने र स्वतन्त्र समाचार लेख्न र बोल्नलाई बन्देज लगाइरहन्छ । बलात्कारीलाई संरक्षण दिइरहन्छ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई नियन्त्रमा लिई कारवाही गर्नुपर्दैन सरकारले । एकजना बलात्कारीलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्ने सरकारले नेपाली जनताको परिवर्तनको क्रान्तिलाई नियन्त्रण गर्छु भनेर ध्वाँस दिन सुहाउँछ । महिला दिदीबहिनीहरुमाथि एसिड आक्रमणजस्तो गम्भीर अपराध बढ्याबढ्यै छ । यो दलाल सरकार र व्यवस्था कायम रहेसम्म देशमा शान्ति, समृद्धिको कल्पना गर्नु बेकार छ ।
यसकारण सबै क्षेत्रबाट अहिलेको दलाल सरकारविरुद्ध धावा बोल्नुको विकल्प कसैसँग छैन । सरकारको कर्तुतहरु भण्डाफोर गरेर अगाडि बढ्नुबाहेक अन्य उपाय छैन । त्यसनिम्ति अहिलेको संविधान र सरकार अनि व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट सबै वर्ग, पक्षलाई समेट्दै नेतृत्व नेकपाले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यादिशासहित नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसैले सबैजना यसमा गोलबन्द हुन र परिवर्तनको अभियानमा सहभागी बन्न अपिल गर्न चाहन्छु । सरकार चौतर्फी रुपमा नांगिँदै र उसको नक्कली जग भत्किन शुरु भइसकेको छ । हामी एकदिन थुनामुक्त हुनेछौं ।